Izincwadi ezi-6 ezikhuluma nge-Auschwitz ngosuku lokukhumbula inkululeko yayo | Izincwadi Zamanje
Izincwadi ezi-6 ezikhuluma nge-Auschwitz ngosuku lokukhumbula inkululeko yayo
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, Amabhuku, I-Novela
Auschwitz ifana nenye eshaqisayo kakhulu okwesabisayo emlandweni wesintu. Namuhla kumaka okusha isikhumbuzo senkululeko ngo-1945 yekamu lokufa elidume kabi kakhulu lamaNazi. Kunemisebenzi eminingi yezinhlobo ezehlukene ngendaba futhi lokhu kuncane ukukhethwa kwamanoveli, ezinye zisekelwe ezenzakalweni zangempela, engiziletha njengesikhumbuzo salolo suku.
1 I-Auschwitz Librarian - u-Antonio Iturbe
2 Usokhemisi wase-Auschwitz. Indaba Engaziwa KaVictor Capesius - Patricia Posner
3 Umfana owalandela uyise e-Auschwitz - uJeremy Dronfield
4 Umculi weTattoo wase-Auschwitz - uHeather Morris
5 Umdansi wase-Auschwitz – u-Edith Eger
6 Uthando e-Auschwitz: Indaba Yangempela - Francesca Paci
I-Auschwitz Librarian - u-Antonio Iturbe
Kule noveli, umbhali wase-Barcelona ulandise indaba esekelwe kuyo amaqiniso angempela. Kuyo, emakamu 31 ekamu, UFreddy Hirsch uvule isikole sesikhashana esino- umtapo wolwazi onesizotha noyimfihlo imfihlo enezincwadi eziyisishiyagalombili. abasha Dita uyazifihla futhi, ngesikhathi esifanayo, akayeki futhi akalokothi alahlekelwe isifiso sokuphila noma ukufunda.
Usokhemisi wase-Auschwitz. Indaba Engaziwa KaVictor Capesius - Patricia Posner
Umbhali usixoxela indaba ka UVictor Capesius, omunye wababulali ababi kakhulu nabantu abangabazi abavela kuMbuso Wesithathu, owawuqapha indawo yokugcina amaNazi Igesi ye-Zyklon B futhi yanikeza odokotela bemithi imithi yokuhlola abesifazane abakhulelwe nezingane. U-Posner uqale axoxe ngesikhathi sakhe njengomthengisi embonini yezemithi, ukubambelela kwakhe ebuNazini, ukwanda kwakhe kokwesaba kulawo makamu okuhlushwa, kanye nokuthi kwakunzima kangakanani ukumyisa enkantolo.
Umfana owalandela uyise e-Auschwitz - uJeremy Dronfield
UDronfield ungumbhali wezomlando, umbhali, umbhali wezincwadi kanye nombhali wezomlando onolwazi olunzulu lokuxoxa izindaba ezibekwe ngeMpi Yezwe II kanye nesitayela esithathwe cishe “seDickensian”. Le noveli isekelwe ku imfihlo idayari ka Gustav Kleinman, owathi, kanye nendodana yakhe uFritz, wamelana iminyaka eyisithupha emakamu amahlanu okuqothula amabi kakhulu, kuhlanganise ne-Auschwitz.
Umculi weTattoo wase-Auschwitz - uHeather Morris
UMorris wazalelwa eNew Zealand futhi kule noveli kusekelwe Indaba yeqiniso kaLale noGita Sokolov, amaJuda amabili aseSlovak akwazi ukusinda ekuQothulweni Kwesizwe. ULale usebenza njengomdwebi wama-tattoo eziboshwa kanti phakathi kwazo kukhona uGita, intokazi athandana nayo. Khona-ke ukuphila kwakhe kuyoba nencazelo entsha futhi uzozama ukwenza konke okusemandleni ukuze uGita nezinye iziboshwa zisinde. Ngemva kwempi, banquma ukuthuthela e-Australia ukuze baqale kabusha.
Umdansi wase-Auschwitz U-Edith Eger
Wazalelwa eHungary, u-Eger wayengum intsha lapho amaNazi ehlasela idolobhana lakubo eHungary futhi emdingisela nawo wonke umkhaya wakubo e-Auschwitz. Abazali bakhe bathunyelwa ngqo ekamelweni legesi futhi yena wahlala nodadewabo, elindele ukufa okuthile. Kodwa nini ibheyili IDanube eluhlaza okwesibhakabhaka kaDkt. Mengele wasindisa ukuphila kwakhe futhi, kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, waqala ukulwela ukusinda agcina ekuzuzile. Wabe esengena ICzechoslovakia yamakhomanisi futhi yagcina ngo United States, lapho ayezogcina esengumfundi kaViktor Frankl. Kungaleso sikhathi-ke, ngemva kwamashumi eminyaka efihla ukuphila kwakhe okudlule, lapho anquma khona ukukhuluma ngokwesaba ayebhekane nakho nokuthethelela njengendlela yokupholisa amanxeba.
Uthando e-Auschwitz: Indaba Yangempela - Francesca Paci
Intatheli uFrancesca Paci wakha kabusha a iqiniso langempela ukhohliwe ngemithombo ekhishwe ezinqolobaneni ze-Auschwitz State Museum, imibhalo yesikhathi nezingxoxo nofakazi abambalwa balokhu. indaba yothando abasaphila. bayifake inkanyezi I-Zimetbaum embi, owesifazane osemusha okhulisiwe futhi onothando, owayekhuluma izilimi eziningana futhi wakhethwa ama-SS njengo umhumushi nomhumushi. Ephana kakhulu, wayehlale ezama ukusiza iziboshwa akanye nazo. Y Edek, u-Edward Galinski, owayeyindoda engavamile ngoba wayenjalo omunye wabadingiswa bokuqala ekamu lase-Auschwitz-Birkenau. Wabona indlela lowo mkhankaso wokuqothula uhlanga owaqala futhi wathuthuka ngayo, kodwa akazange adikibale noma aphelelwe ithemba. Kwakungaleso sikhathi ngo-1944 lapho, nakuba uMbuso Wesithathu wawusuzonqotshwa empini, lapho u-Edek noMala baqala khona ukuthandana futhi babhekana nesiphetho sabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izincwadi ezi-6 ezikhuluma nge-Auschwitz ngosuku lokukhumbula inkululeko yayo
UMónica Rodríguez noPedro Ramos, Umklomelo we-EDEBÉ wezincwadi zezingane nentsha
UPercy Jackson: Izincwadi